အာရုံလွှင့်ပျံခြင်း ပြဿနာ – Live the Dream
အလုပ်ထဲ အာရုံမစိုက်နိုင်ဘူး.. စာထဲ အာရုံစိုက်လို့မရဘူး ဆိုတဲ့ ပြဿနာတွေက ကျွန်တော်တို့ အမြဲကြုံရတတ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသော အတွေးတွေ၊ ဘေးအနှောင့်အယှက်တွေကို တားဆီးနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အာရုံစိုက်မှု တွေကတစ်ဖြည်းဖြည်းအားနည်းလာပြီးနောက်ပိုင်း တစ်ခုခုကိုမိနစ်အနည်းငယ်အာရုံစိုက်ဖို့တောင် တော်တော်ခက်ခဲလာခဲ့တယ်။ ဒီလိုအာရုံမစိုက်နိုင်တဲ့ပြဿနာကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သင်ယူခြင်းတွေမှာ တိုးတက်မှုမရှိတာ၊ အလုပ်ခွင်တွေမှာ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်နည်းလာမျိုးတွေဖြစ်လာရပါတယ်။
အာရုံစိုက်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့အကျိုးများမယ်ဆိုတာ တော့မှန်ပေမယ့်…အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းတွေမြင့်မားအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ အာရုံစိုက်ခြင်းက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြွက်သားတစ်ခုလို ဖြစ်ပါတယ်။ သန်မာတဲ့ကြွက်သားတစ်ခုရလာအောင် အားကစားသမားတွေ ကြိုးစားလေ့ကျင့်ရသလိုပဲ အာရုံစိုက်မှုအားကောင်းအောင် ကိုယ့်ရဲ့ရှိပြီးသားအကျင့်ဆိုးတွေပြင်ရတယ်.. အကျင့်အသစ်တွေကို မွေးရတယ်…လေ့ကျင့်ရတယ် စသည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ကဲဘာတွေများလုပ်ရမလဲ? အောက်ကအချက်လေးတွေကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်…
ကျွန်တော်တွေက အာရုံလွှင့်ပျံစေမယ့်အရာတွေများစွားဝိုင်းရံခြင်းကို ခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ ခေါ်သံတစ်ချက်လေးတောင် ကျွန်တော်တို့ အာရုံလွှင့်ပျံဖို့လွယ်ကြတဲ့သူတွေပါ။ အရမ်း Flexible ဖြစ်လွန်းတယ်လို့ခေါ်မလား? မင်မင်ကိုယ်တိုင်လည်း နှစ်ခါမခေါ်ရဘူး အလုပ်ကို ပစ်ချပြီး ကောက်ကောက်ပါတဲ့အထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ။ အနီးကလူတွေတင်မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ရဲ့ Phone တွေ၊ ကွန်ပြူတာတွေရဲ့ Notification အသံလေးတောင် အာရုံမစိုက်နိုင်အောင် အနှောင့်အယှက် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ခုခုကို အာရုံစိုက်လုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်အနှောင့်အယှက်ပေးစေမယ့်အရာတွေကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့ချဖို့အကြံပေးပါရစေ။ ဥပမာအားဖြင့် ဖုန်းတွေကို Silent Mode လုပ်ထားတာ၊ တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာ တွေမှာ စာလေ့လာတာ(သို့) အလုပ်လုပ်တာ၊ အရေးမကြီးတဲ့အရာတွေကို ဦးစားမပေးမိအောင်သတိထားတာ စသည်ဖြင့် အနှောင့်အယှက်တွေရဲ့အဝေးကို ရှောင်နေဖို့လိုပါတယ်နော်…
တစ်ချိန်ထဲမှာ အလုပ်နှစ်ခု လုပ်လို့ အလုပ်တွင်မယ်လို့ ထင်ရင် ဒီအယူအဆကို ဖျောက်ပြစ်ဖို့အရင်ဆုံးပြောပါရစေ.. ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်လုပ်တာက အာရုံလွှင့်ပျံဖို့၊ အာရုံတွေရှုပ်ထွေးသွားစေဖို့ လွယ်ကူလှပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့မှာ လုပ်စရာတွေ၊ လေ့လာစရာတွေ အများကြီးရှိနေသည့်တိုင် တစ်ခုထဲကို အာရုံစိုက်လုပ်ဖို့ အကြံပြုပါရစေ.. တစ်ခုထဲအာရုံစိုက်လုပ်နိုင်ခြင်းကသာ လေ့လာခြင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်ခွင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့ အသေးစိတ်ကို သိရှိနိုင်ဖို့၊ အလုပ်ပိုမို မြန်ဆန်တွင်ကျယ်စေဖို့ နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အလင်းတန်းတစ်ခုကို တစ်နေရာထဲ စုထိုးတာနဲ့ နေရာတော်တော်များများကို ဖြန့်ထိုးတာ ဘယ်အရာက အလင်းအားပိုပြင်းလဲ? ဘယ်အရာက သေချာပိုမြင်ရလဲ? ဆိုတာကို မြင်ယောင်ကြည့်ရုံနဲ့ တစ်ခုထဲအာရုံစူးစိုက်နိုင်ခြင်းအကျိုးကို နားလည်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်…
ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး လူမှုရေး .. စတဲ့အရေးတွေ အကုန်ရောထွေးပြီး ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့ဘဝကြီးကို လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်။ အဆင်မပြေမှုတွေက တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရှိတာမို့ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်များစွာနဲ့ အတိတ်ကအကြောင်းတွေ၊ အနာဂတ်အကြောင်းတွေကို အများကြီးတွေးဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ အခုလက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ ဘဝပျော်ရွင်မှုတွေကို မခံစားနိုင်တော့ဘူးလေ။ အလုပ်ထဲကို လည်းအာရုံမစိုက်နိုင်၊ စာတွေလည်းမလေ့လာနိုင်၊ သူငယ်ချင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ပျော်နေရမယ့်အစား အပူတွေများတော့ မပျော်နိုင်တော့ဘူး။ ဒီတော့ ဘာကောင်းကျိုးမှမရှိတဲ့ ဒီစိုးရိမ်မှုကြီးကို ဘာလို့ ဖမ်းဆုတ်ထားတော့မှာလဲ? အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကို အကောင်းဆုံးသာ အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်အတွက်ထူးခြားမှုဆိုတာ ဇွဲလုံ့လရှိတဲ့အတိုင်းပြန်ရစမြဲပဲ။ ဒီတော့ အတိတ်ကိုလည်း မတွေးနဲ့၊ အနာဂတ်အတွက်လည်းစိတ်မပူနဲ့ ခုလက်ရှိပစ္စုပ္ပန်မှာပဲ နေထိုင်ပါ။ ပစ္စုပ္ပန်ကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါနော်..
၄. အနားယူဖို့ မမေ့နဲ့
ကိုယ့်အနေနဲ့ အကြာကြီးအာရုံစိုက်နေရင် ဦးနှောက်တွေ ထူပူလာပြီး ဘာမှစဉ်းစားလို့မထွက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ၊ ဘာမှ ဆက်လုပ်လို့မရတဲ့ အချိန်မျိုးတွေ ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ မရမက ဆက်လုပ်မနေပဲ ခဏလမ်းထလျှောက်တာ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ခဏစကားပြောတာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်လာတာမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်အနာပေးပါ။ လူရဲ့ဦးနှောက်က အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းအတိုင်းအတာရှိတဲ့အတွက် ခဏအနားယူခြင်းကလည်း အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ.
နိဒါန်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲ အာရုံစိုက်နိုင်ခြင်းဆိုတာ စိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာ ကြွက်သားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြွက်သားကို ပိုပြီးသန်မာလာအောင် လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြားဖူးကြမှာပါ Meditation လုပ်တာမျိုးတွေ..။ ဟုတ်ပါတယ် အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းမြှင့်တက်လာအောင် Meditate လုပ်ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စာအုပ်ဖတ်တာ၊ သီချင်းနားထောင်တာ၊ ပန်းချီဆွဲတာ၊ အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အရာတွေလေ့လာတာကလည်း အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်စေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းကို ဖျက်ဆီးစေတတ်တဲ့ Social Media တွေကို အချိန်အကန့်အသတ်နဲ့ သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း တစ်ခုပြီးတစ်ခု တက်နေတဲ့ Social Media Post တွေက ဦးနှောက်ရဲ့ အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အနေနဲ့ ဒီလို Social Media တွေကို စွဲလမ်းလေလေ အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းတွေ ပျက်စီးလေလေဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ အာရုံစိုက်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက် က အားကစားသမားတစ်ယောက်လိုပါပဲ။ အားကစားသမားတစ်ယောက်က ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိအောင်မြင်နေပါစေ အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေရပါတယ်.. ဒီလိုပဲ အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းတွေ ပိုမိုမြှင့်တက်ဖို့ဆိုတာ အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်က အချက်တွေမှာလည်း ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးပြီးပြီးဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် အာရုံမစိုက်နိုင်တဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ပဲ လိုပါတော့တယ်နော်…